Madheshvani : The voice of Madhesh - दुईबुँदे सहमतिले एकता भाँडिएको छैन : सत्यनारायण मण्डल
२०७६ साल पुस ४ गते शुक्रबार
० चुनावी परियोजनका लागि मात्र राजपाले नेकपासँग सहमति गरेको हो ?
— निश्चितरूपमा नेकपा सबभन्दा ठूलो दल हो र उसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । हाम्रा एजेन्डाहरू पनि पूरा गराउन नेकपाको सहयोग चाहिन्छ । राजपा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी हो र राजपाले उठाएका मागहरू राष्ट्रिय माग भएकाले हामी नेकपासँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । हामी संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छौं तर, त्यसका लागि नेकपाको सहयोग नभई हुँदैन । त्यसैले नेकपासँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । जहाँसम्म समाजवादीको कुरा छ, अहिलेसम्म हामीबीच एकता भइसकेको छैन । त्यसैले, राजपा वा समाजवादीले कुनै निर्णय गर्दा एकअर्कालाई सोध्नै पर्ने बाध्यता छैन । समाजवादी पार्टी सरकारमा जााँदा हामीसँग सोधेको थियो र ।
० भनेपछि यो सहमतिले समाजवादी पार्टीसँगको एकता टरेको हो ?
— राजपा र समाजवादीबीच एकताको वातावरण भाँडिएको छैन, एकताका लागि वार्ता जारी नै छ । हामीले एकता गर्दैनौं भनेका छैनौं । अहिले एकता वार्ता चलिरहेकाले हामी कुनै दलसँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्दा एकअर्कासँग सल्लाह गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । दुवै पार्टी एक नभएसम्म आआफ्नो किसिमले कार्य गर्न स्वतन्त्र छन् ।
० राजपा पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा चर्चा मात्र हुने गरेको छ, के भईरहेको छ अहिले । पार्टीभित्र महाधिवेशनको तयारी छ कि ?
– हामी वडा, गाउँ, जिल्लादेखि लिएर क्षेत्रसम्म अधिवेशन गर्दै आइपुगिसकेका छौं । तर, सबै जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन भइसकेको छैन । केही जिल्लाहरूमा बाँकी छ त्यो पनि यही पुस ३० गतेसम्म हामीले गरिसक्छौं । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथिमिति तय गरेर महाधिवेशन हुन्छ । मधेशका विभिन्न दलहरू मिलेर राजपा नेपाल बनेको हो र सबैजनाको आ–आफ्नो उद्देश्य थियो, आफ्नै कार्यशैली थियो । त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं त्यो नै एउटा ठूलो उपलब्धी हो । त्यसभित्र केही मतभिन्नताहरू हुनु स्वभाविक नै हो । अब हामी एकसूत्रमा बाँधिएका छौं । त्यसकै उपज हो अहिले जिल्ला अधिवेशनसम्म हामी आइपुगेका छौं । केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर हामी थप ऊर्जाका साथ देशभरी राजपाको झण्डा फँहराउने छौं ।
० दुई पटक महाधिवेशनको मिति तोकेर पनि महाधिवेशन हुन सकेन । अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
– त्यहाँ लिगेसीको विषय आयो । ६ वटा पार्टीको पहिले भएको जुन संगठन थियो तिनीहरूको अवशेष केही बाँकी नै रहेछन् । वडा अध्यक्षदेखि लिएर जिल्ला अध्यक्षसम्म उनीहरूको छुट्टाछुट्टै संरचना थियो । ती सबै संरचनालाई एकस्ूत्रमा बाँधेर ६ वटै संगठनको एउटै वडा अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्षसम्म ल्याउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो पर्न गयो । जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भईसकेपछि अब केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । हामी सजिलै तिथिमिति तय गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गछौं ।
० तपाईहरूको पार्टीमा त ६ वटा अध्यक्षभित्रै मुख्य समस्या छ भनिन्छ नि ?
– बाहिरबाट त्यस्तो देखिएको होला तर पार्टीभित्र त्यस्तो विवाद छैन । केन्द्रमा अहिले जसरी अध्यक्षमण्डलले चक्रीय रूपमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले महाधिवेशनपछि मै अध्यक्ष हुन्छु भनेर कोहीले भन्नुभएको छैन । प्रतिस्पर्धाको भावना राखेर गुट–उपगुट बनाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छैन । महाधिवेशनमा अहिले रहेको अध्यक्ष मण्डलभन्दा बाहिरबाट पनि अध्यक्षका लागि उम्मेदारवारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यस्तोसम्म अहिलेको हाम्रो व्यवस्था रहेको छ ।
० यदि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नभएको भए किन दुई\_दुई महिनामा संयोजक परिवर्तन भइरहेको छ, एकैजनाले पार्टी चलाउँदा त हुन्थ्यो नि ?
– जुनबोला ६ वटा पार्टी अलग अलग थियो त्यसबेला ६ वटा पार्टीका अध्यक्षहरू एकठाउँमा बसेर जुन काम गर्दै आइएको थियो, त्यही काम गरौं भन्ने भावनाले नै यो राजपा पार्टीको निर्माण भयो । तर, त्यतिबेला संक्षिप्त विधानको निर्माण गरियो । त्यसमा चक्रीय प्रणालीमा अध्यक्षता ग्रहण गरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने, अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निस्केको हुनाले अहिले पार्टी त्यही विधान अनुरूप संचालन भइरहेको छ । महाधिवेशनपछि चक्रीय प्रणाली स्वतः समाप्त हुन्छ र पार्टी एकल नेतृत्वमा जान्छ ।
० अध्यक्षमण्डलकै कारण दुईपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति असफल भयो भनेर दोस्रो तहका नेताहरूको आरोप छ नि ?
– युवा, विद्यार्थी लगायत हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म हुनुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन दुई पटक टरेर गयो । त्यसमा केही गल्ती अध्यक्षमण्डलबाट पनि हुन पुगेको छ । विगतमा भएको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब अध्यक्ष मण्डल पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । दोस्रो तहमा रहेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूको आशा अनुसार अध्यक्षमण्डलले काम गर्न नसकेकै हो ।
० केन्द्रीय रूपमा रहेका वर्गीय भातृसंगठनहरूलाई पनि समायोजन गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म किन यसमा ढिलाई भएको हो ?
– जसरी हाम्रो पार्टीगत संगठनहरूले जुन समस्याहरू झेलिरहेको छ त्यही समस्या भातृसंगठनहरूको समायोजनमा पनि रहेको छ । ६ वटा पार्टीको अलग–अलग भातृसंगठनको अलग अलग केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर जिल्ला अध्यक्ष, गाउँ विकास समितिसम्म रहेको छ । ती सबैलाई समायोजन गरेर एक बनाउनु आफैमा चूनौतीपूर्ण काम त छँदैछ । तर, अहिले हामी जसरी विभिन्न चरणमा महाधिवेशन गरिरहेका छौं, त्यहीँबाट यो भातृसंगठनको पनि समस्या समाधान गछौं । त्यो सबैको प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको छ । अब निकट भविष्यमा सबै समायोजित भएर अगाडि बढ्छौं ।
० उपनिर्वाचनको समयमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता हुने विषय व्यापक चर्चामा थियो अहिले सेलाएको छ । के यो चुनावी एजेन्डा मात्र थियो कि ?
– विगतमा भएको चुनावमा हामी प्रदेश २ मा गठबन्धन निर्माण गरेर चुनाव लडेका थियौं । अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा पनि सके पार्टी एक भएर अगाडि बढौं नभए गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौं भन्ने विषय नउठेको होइन । तर केही विषयमा मतभिन्नता भएर धेरै ठाउँमा हामीले अलग–अलग उम्मेदवार खडा गरेर उपनिर्वाचनमा गयौं । पार्टी एकता नगर्दा हामीलाई कुन ठाउँमा कसरी कांग्रेस, कम्युनिष्टका उम्मेदवारहरूले पराजित गरे त्यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौं । अब आउने निर्वाचनमा समाजवादी र राजपा पार्टी मिलेर मेचीदेखि महाकालीसम्म चुनाव लड्छ र जितेर विजय जुलुस निकाल्छ । पार्टी एकताको विषय उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भएको थिएन । लामो समयदेखि पार्टी एकताको विषयमा छलफल भइरहेको छ । एजेण्डा मिल्ने पार्टीसँग एकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतदेखि कै धारणा हो । त्यस विषयमा दुवै पार्टी सकारात्मक छौं ।
० उपनिर्वाचनको परिणाम राजपाको लागि खासै सुखद रहेन । राजपाले आश गरेको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गुमायो भने अन्य धेरै क्षेत्रको परिणाम खासै अपेक्षाअनुरूप आएन नि ?
– तपाईले प्रदेश २ को कुरा गर्नुभयो तर प्रदेश ५ मा जहाँ हामीले निर्वाचनमा सहभागीता नै जनाएका थिएनौं, त्यहाँ उपनिर्वाचनमा जित्यौं । यो हाम्रो लागि उपलब्धी हो । यो उपनिर्वाचनमा हामीले जसरी समय दिएर मेहनत गरेर लाग्नुपर्दथ्यो त्यो गरेनौं । त्यसमा हाम्रो कमीकमजोरी देखियो । अबका दिनमा हुने निर्वाचनमा यस्तो गल्ती गर्ने छैनौं । हामीले उपनिर्वाचनबाट पाठ सिकेका छौं ।
० यो उपनिर्वाचनलाई राजपाले खासै महत्व नदिएको हो ?
– महत्व त दिएको हो । जहाँ पार्टीले उमेम्दवारी दिएको थियो त्यहीँका स्थानीय तहको नेतालाई हामीले प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी दियौं । केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले पनि त्यहाँ जाने उम्मेदवारहरूलाई सरसल्लाह दिने, त्यहाँका मतदाताहरूसँग मत माग्ने, विभिन्न ठाउँमा सभा, सम्मेलन गर्ने काम गर्नुपर्दथ्यो तर त्यस्तो भएन । राजपाका जिल्ला स्तरका नेताहरू त लागेकै थिए तर अध्यक्षमण्डले उपनिर्वाचनमा सोचेअनुरूपको सहयोग नगरेकै हो ।
० भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग प¥यो भनेर सवालहरू उठिरहेको छ । यसलाई कसरी हेनुभएको छ ?
– हाम्रो देश नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो जसको आफ्नो सरकार, भूभाग, जनसंख्या रहेको छ । अहिले भारत वा चीनले हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर विषय उठेको छ । हाम्रो देशमा दुई तिहाइको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो देशमा परराष्ट्र हेर्ने निकाय छ, कुटनीतिक नियोगहरू छ, दुतावास छ त्यहाँबाट हामी कुरा गर्न सक्छौं नि । तर, हामी सडकमा, दुतावास अगाडि आन्दोलन गछौं, भारतको झण्डा जलाउँछौं यो गलत हो । हामी भारत र चीनसँग लडाँई गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले हामी बीचमा देखिएका समस्याहरूलाई कुटनीतिक तबरबाट समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।